WARBIXIN:- Shacabka Muqdisho oo caqabad ku noqday bilicda wadooyinka – XAMAR POST
WARBIXIN:- Shacabka Muqdisho oo caqabad ku noqday bilicda wadooyinka
Shacabka ku nool degmooyinka qaar ee Gobolka Banaadir ayaa caqabad ku noqday bilicda iyo Nadafadda Wadooyin dib u dhis lagu sameeyay,
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sameeyay jadwal iyo nidaam lagu nadiifinayo degmooyinka Gobolka, maadaama Todobaadka maalin ka mid ah degmo walbo laga sameeyo Olole nadaafadeed, halka bishiina uu jiro Olole Nadaafadeed oo guud.
Maamulka Gobolka ayaa sidoo kale wuxuu shacabka Soomaaliyeed u sameeyay meelo gaar ah oo ay dhigaan qashinka ay ka soo qaadaan guryahooda, balse shacabka ayaa u xuub siibtay in ay caqabad joogto ah ku noqdaan bilicda wadooyinka.
Wadooyinka waa weyn ee Muqdisho oo mudo burbursanaa ayaa dhowaan qaarkood lagu sameeyay dayactir balaaran, balse dadka qaar ayuusan u muuqan hormarkaas.
Tusaale aynu aadno wadada u dhaxeysa Isgoyska Ceel-gaabta iyo Buundooyinka dhanka degmada Xamar Jajab, subixii dad fara ku tiris ah oo isugu jira Odayaal iyo Haween ayaa la soo baxa qashin xaaqayaal, iyada oo qof walba meheradiisa hortiisa ka soo fogeeyo qashinka, kuna soo shuba Laamiga.
Hadaad is leedahay maxaa loo sheegayaa dadka sidaas sameynaya su’aashaas waxaa kaaga jawaabaya dadka qaar ee doonaya in Nadaafada laga wada shaqeeyo, degana isla degmada Xamar Jajab.
Sidoo kale dadka qaar oo maalinkii oo dhan biyaha keydiya ayaa habeenkii waxa ay laamiyada ku soo shubaan biyihii wasaqda ahaa, xilligaasi oo laamiga aad moodo in ay ku soo furantay Tubo go’day, sida uu sheegayo Ibraahim Cali Raage oo ka mid ah dhalinyarada ku nool Muqdisho.
Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil C/laahi ayaa afka ku balaarinaya in degmadiisa ay tahay degmo cusub, balse ay ganaaxayaan cidii gurigooda hortiisa ay ku arkaan qashin, maadaama degmadiisa aysan laheyn Laami.
Duqa Magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa bilo ka hor sheegay in Maamulka gobolka Banaadir uusan ogolan doonin in Muqdisho qeyb ka mid ah lagu daadiyo qashin lagana qeyb qaato bilicda Magaalada Muqdisho.
Waxa uu sheegay in dhowr mar ay sameeyeen wacyigelin buuxda basle Maamulka Gobolka Banaadir uu talaabo ka qaadi doono cidii qashin ku daadisa Magaalada dhexdeeda, sidoo kalena ay ula dagaalami doonaan sida Shabaabka.
Dal bilic leh waxaa dhalin kara shacabka ku nool dalkaas, oo ka wada shaqeeya Nadaafadda, gaar ahaana Wasaqda ka ilaaliya indhaha dalka sida wadooyinka iyo goobaha kale ee quruxda badan, hadaba miyaysan wanaagsaneyn in dhammaanteena aan ka wada shaqeyno Nadaafadda, jawaabta oo aan ka gambasho laheyn waa Haa !!!.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee koofur galbeed oo Sheegay in naftiisa oo kala Soo baxay Baydhabo.